Resadresaka: Justin Min momba ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fianakaviana ao amin'ny 'The Umbrella Academy' an'i Netflix [SPOILERS]
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Resadresaka: Justin Min momba ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fianakaviana ao amin'ny 'The Umbrella Academy' an'i Netflix [SPOILERS]
nosoratan'i Waylon Jordan March 14, 2019
Raha manontany an'i Justin Min ianao hoe inona no napetraka Ny Akademia Umbrella, miorina amin'ny tantara an-tsarimihetsika Dark Horse nosoratan'i Gerard Way of My Chemical Romance, ankoatr'ireo sarimihetsika mahery vaika sy andian-tantara hitanay tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia holazainy aminao fa, amin'ny faran'ny andro, dia satria tsy ' t momba ny firenena matanjaka indrindra.
Ilay mpilalao sarimihetsika, izay milalao an'i Ben Hargreeves ao amin'ny Andiany Netflix, manamafy fa ny tena mahasarika ny mpijery dia ny fifandraisany.
"Tsy momba ny hadalana rehetra hitany ny tenany," hoy izy nanondro tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana. “Momba ny fianakaviana izany. Heveriko fa, na iza na iza ianao dia afaka mifandray amin'ny dinamika ao amin'ny fianakaviana ary na dia ny fianakaviana tsy miasa aza. Tiako fa ny seho ataonay dia manasongadina ireo underdogs sy ireo olona izay tsy dia miaraka ny fiainany izay mbola afaka miara-miasa hanao soa. ”
Io fientanam-pianakaviana adala sy tsy miasa io no nahasarika ilay mpilalao sarimihetsika Aziatika-amerikana tamin'ilay tetikasa, na dia niaiky aza izy fa tsy fantany akory izay nanaovany audition rehefa nanomboka ny fizotrany.
Justin Min a Ben Hargreeves ao Ny Akademia Umbrella
Raha ny marina, tamin'ny audition voalohany dia jamba tamin'ny lafiny iray izy. Nomena sehatra hosoka izy hanaovana audition, na dia nandritra ny antso an-tariby maro aza. Rehefa vita ny famandrihany ilay asa ary herinandro nialàny tamin'ny fiaramanidina hitodi-doha nankany Toronto mba hanombohana naka sary azy dia nomena ny lohatenin'ny fampisehoana sy ny toetrany izy tamin'ny farany.
Min dia nanidina avy tao an-tranony nankany amin'ny fivarotana tantara an-tsary teo an-toerana mba hanangona vaovao betsaka momba ny toetrany araka izay hitany fa izay mety ho taitra lehibe indrindra tamin'ny rehetra.
"Indreo, hitako fa efa maty izy [Ben]," hoy izy, nihomehy. “Vao mainka aho very hevitra. Tsy fantatro izay nitranga. ”
Rehefa tonga tany Toronto ihany izy tamin'ny farany hanatevin-daharana ny sisa amin'ny mpilalao raha nanam-potoana hiresahana tamin'ny mpanoratra Steve Blackman izy vao nanomboka niaraka niaraka taminy ny raharaha.
Farany, nanipika izy fa niasa ho azy io satria izy, miaraka amin'ireo mpanoratra ny fandaharana, dia afaka nanangana ilay toetra amam-panahy hatrany amin'ny fivoarana sasany tonga tao anatin'ny fandaharam-potoana fitifirana ho an'ny andiany.
Tamin'ny alàlan'ny famerenana kely sy fanovana ny endrik'ilay tantara an-tsary tany am-boalohany dia nanome fiainana vaovao i Ben, raha ny marina, ary ny fiainana aorinan'ny fiainana vaovao. Mazava ho azy fa nanampy an'i Klaus Hargreeves, nolalaovin'i Robert Sheehan nahafinaritra, fa mpanelanelana amin'ny tontolo izy!
Ben (Justin Min) sy Klaus (Robert Sheehan) any Ny Akademia Umbrella ao amin'ny Netflix. (Sary avy amin'i Netflix)
Na izany aza, ny zava-misy fa teo i Ben tamin'ny fanahy fotsiny dia nanolotra fanamby ho azy manokana amin'ny fakana sary.
"Tena mampihomehy satria nisy imbetsaka tsy maintsy nitifitra sary indray mandeha izahay satria ny iray tamin'ireo mpilalao hafa dia nifandray tamiko na 'nahita ahy' nefa tsy tokony ho izy ireo," hoy ny fanazavany.
Io mavitrika io dia nahafahany niasa tamin'ny fampandrosoana ny fifandraisana teo aminy sy i Sheehan, izay nantsoiny hoe "mpiara-miasa lavorary amin'ny heloka bevava", nandritra ny fitifirana. Ben dia rahalahin'i Klaus ihany, na dia maty aza, fa izy koa dia fomba sasany amin'ny feon'ny fieritreretana Klaus.
"Nihevitra izahay fa hahaliana ny mahita ny fihetsiky ny mpankafy" hoy izy. “Raha heverin'izy ireo fa matoatoa i Ben na niasa tahaka ny feon'ny fieritreretan'i Klaus. Ny toetrantsika dia tena fanitarana ny maha-olona antsika. Rehefa manao zavatra mahatsikaiky i Robbie, na eo am-piasana, dia mihodina fotsiny aho ary mihomehy azy. ”
Io dinamika io dia azo tifitra niaraka tamin'i Sheehan, ary nanaiky i Min fa ny ankamaroan'ireo seho ataon'izy ireo dia misy fanatsarana isan-karazany avy amin'ilay mpilalao sarimihetsika Irlandey.
Na i Ben na i Klaus dia tsy nahazo aina mihitsy tamin'ny herin'izy ireo Ny Akademia Umbrella, farafaharatsiny amin'ny ampahany satria toa kely dia kely ny azon'izy ireo natao hifehezana azy ireo.
Ben, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe The Horror, fony izy mbola velona, ​​dia nandalo fiovana mahatsiravina isaky ny miseho ny heriny miaraka amina tranony goavambe, mahafaty avy amin'ny vatany izay afaka mamono ny olona rehetra ao anaty efitrano.
"Nieritreritra aho fa mampihomehy tokoa fa ity toetra fantatra amin'ny anarana hoe The Horror ity izay manana ireto biby goavam-be ireto eo ambanin'ny hodiny no tena mahamenatra sy mamy indrindra amin'ny vondrona," hoy i Min. “Tsy tiany ny maherifo ary tena tsy tadiaviny izany. Te-hamorona toetra tsy hay hadinoina fotsiny aho mba hinoan'ny mpanatrika fa noho ny fahafatesany dia nisaraka ny fianakaviana iray manontolo. ”
Na dia mbola zatovo aza i Ben, izay tena havanana rà, tsy nahazo aina tamin'ny heriny. (Saripikan'i Christos Kalohoridis / Netflix)
Raha miverina mijery ny tetik'asa isika ankehitriny rehefa navahana sy nanjary fahatsapana teo amin'ireo mpankafy antitra sy vaovao, ny fankasitrahan'i Min dia saika tototry ny antony marobe, ary tsy ny kely indrindra amin'izany ny zava-misy Ny Akademia Umbrella nampiseho fahasamihafana sasany tamin'ny fandefasana azy.
"Iray amin'ireo olana tiako indrindra amin'ny maha-mpilalao Aziatika-amerikanina ahy izany ary tsy afaka nankasitraka bebe kokoa ilay ekipa mpamorona aho ary ho an'i Gerard izay nanaiky fa io no iray amin'ireo zavatra tiany indrindra ovaina," hoy izy. “Mpilalao sarimihetsika isan-karazany izay maneho ny tontolo iainantsika ankehitriny? Heveriko fa ny tsy fitoviana dia mbola tsy ampy eo amin'ny sehatry ny karazan'olona mahery fo ka tena nahafinaritra. "
Faly koa izy ho an'ny fianakaviana lehibe azony tamin'ny fiasana Ny Akademia Umbrella nanondro fa misy simia eo noho eo eo amin'izy rehetra, ary na dia nijanona tsy nihodina aza ny fakantsary dia nahatsapa ho toy ny fianakaviana lehibe be izy ireo.
Ny Akademia Umbrella amin'izao fotoana izao dia mivezivezy ao amin'ny Netflix, ary na mbola tsy ofisialy aza dia misy ny tsaho milaza fa efa akaiky ny fanambaràna ny vanim-potoana faharoa ary samy nilaza ny fanantenan'izy ireo ny hitohizan'ny fandaharana i Blackman sy i Way.
Justin MinNetflixRobert SheehanAkademia UmbrellaWaylon Jordan
Adrienne Barbeau dia manatevin-daharana ny mpilalao andiany 'Swamp Thing' ho avy
'Knife + Heart' dia Gritty Giallo miaraka amin'ny Queer Twist
'Jurassic World: Dominion' Teaser dia mitentina 65 tapitrisa ...
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (9) AppleTV + (4) Blu Rays (5) Horohoro amin'ny hatsikana (46) Tantara an-tsary (13) Facebook (andiany) (1) Angano (39) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (5) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (54) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,652) Sarimihetsika mahatsiravina (239) Horror Series (62) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (4) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (35) Resadresaka nifanaovana (andiany) (2) Horohoro LGBTQ (38) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (48) Sarimihetsika (14) Mozika (35) Netflix (sarimihetsika) (21) Netflix (andiany) (25) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (8) Shudder (sarimihetsika) (44) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (35) Sarimihetsika mivantana (65) Streaming Series (25) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (196) Tranofiara (andiany) (37) Heloka tena izy (43) Lalao video (178) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)